Nin si xun u dilay Mukulaal oo xukun adag lagu riday iyo Warbaahinta oo hadal heysa (Daawo Sawirada) – Balcad.com Teyteyleey
Nin u dhashay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Robert Farmer ayaa lagu riday xukun adag oo xabsi ah ,kadib markii lagu helay in uu si xun oo arxan la;aan ah u dilay Mukulaal ama Yaanyuur.
Maxkamad ku taal magaalada San Jose ee Gobolka California ayaa 16-sano oo xabsi ah ku riday Robert Farmer oo 26-sano jir ahaa, ninkan ayaana ku cadaatay in uu si xun u ciqaabay kadibna u dilay Mukulaal da’deeda lagu sheegay 16-sano.
Ciidamada booliiska ayaa la sheegay in ninkan oo falka dilka ah geestay bishii Octoper sanadkii 2015-kii kasoo dhax qabteen gaarigiisa isaga oo hurda, waxaana ninkan gaariga uu watay dushiisa lagu arkay qeyb kamid ah jirka mukulaasha uu dilay.
Maxkamada ayaa cadeyn ahaan loo horkeenay muuqaal ay duubtay kaamirad ku xirneed halka uu falkan dilka ah ka dhacay, waxaana Xkunka adag ee ninkan lagu riday si weyn usoo dhaweesay haweneyda iska laheed mukulaasha la dilay.
Warbaahinta Caalamka ayaa si weyn u hadal heysa dhacdadan ka dhacday dalka Mareykanka iyo xukunka adag ee ninkan uu ku muteestay dilka arxan darada ah uu u geestay Mukulaasha, dadka qaarkood ayaana soo dhaweeyay xukunka ninkan lagu riday.